Oatmeal uye Banana Porridge neAlmond Cream | Kicheni Mapepa
Banana oatmeal porridge nealmond cream
Maria vazquez | 04/09/2021 10:00 | Nyore Mapepa
Unoziva madiro andinoita porridge, inozivikanwawo seporridge. Munguva yezhizha ini ndinowanzoitsiva neimwe nzira, asi munaGunyana nekudzoka kune zvavakajaira vanodzoka kuzoita nyeredzi mumabiko angu emangwanani. Nezuro ndakagadzirira izvi oatmeal uye porridge yebhanana ine almond cream izvo zvandinofunga nhasi.
Porridge inzira yechinyakare uye inonyaradza kwazvo panguva ino yegore, apo mangwanani neusiku zvinotanga kutonhora. Ivo zvakare vanokuzadza iwe nesimba rekutarisana nevose avo vanokandwa mangwanani. Iyo yekubheka iyo yandinofunga nhasi ndeimwe yeakareruka, asi kwete zvishoma zvinonakidza izvo.
Zviri nyore kwazvo kugadzirira. Iyo oatmeal uye porridge yebhanana ine almond cream inoda zvishoma kupfuura kusanganisa uye kudziyisa. Mumaminetsi gumi chete iwe unenge uine ndiro yako yeporridge yakagadzirira iyo iwe yaunogona zvakare kuwedzera ese iwo matopu aunoda. Ini ndinoda mubatanidzwa webhanana uye chokoreti asi unogona kuzvichinjira imwe.
Iyi Banana Oatmeal Porridge neAlmond Cream inzira yakanaka yekudya kwemangwanani. Nyore, kutsanya uye kunyaradza kwazvo.
Kubika nguva: 8 M
Nguva yakazara: 13 M
150-200 ml yemuarumondi chinwiwa
1 bhanana rakaibva.
½ supuni yearmond cream
Chokoreti machipisi (ekushongedza)
Isu tinosanganisa muhombodo 3 mapunipuni eoats akakungurutswa, 150 ml yechinwiwa chearimondi, banana mabhanana akaibva uye ½ chipunu chealmond cream.
Mushure mezvo, tinopisa uye tinounza kumota. Kamwe wira tinobika pamusoro wepakati / wakaderera kupisa kwemaminetsi masere, ichikurudzira gruel nguva nenguva. Muchiitiko chekuti isu tinofarira iyo porridge lighter, tinodurura imwe mukaka.
Mushure memaminitsi masere tinoshumira porridge neimwe hafu yebhanana, yakatemwa uye yakabikwa, mamwe chokoreti nesinamoni machipisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Special Recipes » Nyore Mapepa » Banana oatmeal porridge nealmond cream
ChiGiriki moussaka: chikafu chetsika
Swiss chard uye chizi omelette